Woody Allen oo ka noqdey dacweydii amazon – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Woody Allen oo ka noqdey dacweydii amazon
Woody Allen oo ka noqdey dacweydii amazon
Filim sameeyaha Mareykanka Woody Allen ayaa ka noqday cabashadiisa dhanka Amazon, oo uu ku eedeeyay inuu si aan kala sooc lahayn u joojiyey qandaraas kadib markii uu heshiis la galay shirkadda weyn ee internetka, sida ku xusan dukumiintiyada maxkamadda ee maxkamadda New York.
Woody Allen ayaa dacwad ka gudbisay shirkadda ‘Amazon’ bishii Febraayo ee la soo dhaafay, isaga oo waydiistay $ 68 milyan oo lagu soo oogay eedaymo ah in ay joojiyeen qandaraaskoodii asagoo ku saleynaya eedeymo hore.
Ma uusan shaacin faahfaahinta heshiiska dhex maray labada dhinac, laakiin ilo xog ogaal u ah fekerka ayaa u sheegay goobta “Xilliga Kama Dambeysta” in “ma jiro guuleyste iyo aakhiro khasaare.”
Gabadha Woody Allen, Dylan Farrow, waxay aabbeheed ku eedeysay 1992 inuu kufsaday. Dacwad-oogayaasha ka dhanka ah waa la tuuray kadib markii laba baaritaan oo kala gooni gooni ah muddadaas lagu jiray dhowr bilood.
Si kastaba ha noqotee, iyada oo la kaashanayo hooyadeed, Mia Farrow iyo walaalkeed Ronan Farrow, Dylan Farrow waxay si joogto ah u cusbooneysiisaa eedeymahaan, gaar ahaan ka dib markii ay soo ifbaxeen dhaqdhaqaaqa Me2 (iyo aniga) si ay u kashifaan faraxumaynta galmada.
Eedeymaha ayaa ku kiciyay Amazon inay joojiso sii deynta “Roob Maalin ku diley New York,” filimkii ugu dambeeyay, ee Mareykanka.
Weyne Internet-ka Woody Allen wuxuu ku eedeeyay Amazon inay diidey inay bixiso $ 9 milyan oo lagu maalgalinayo filimka, kaasoo ka furmay furitaanka Bandhigga Filimka Mareykanka ee Deauville, France, bishii Sebtember.
Agaasime Mareykan ah oo ah 83-jir, ayaa muddo dheer dafiray inuu faraxumeeyey gabadhiisa.
Previous articleKheyre oo ka baaqday safarkii Beledweyne
Next articlewiil Mareykan ah oo wadnahu istaago dhowr daqiiqo maalin kasta
Maxaad ka Taqaanaa Taariikhda Madaxweynaha Cusub ee Gal-Mudug Dr Sheekh maxamed...